Ukwazi uNkulunkulu | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
7 Wezihloko Zobufakazi
Ake sibheke lesi siqephu sokuqala: “Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona ukukhanya: kwase kuba khona ukukhanya. Futhi uNkulunkulu wakubona ukukhanya ukuthi kuhle: Wase uNkulunkulu ehlukanisa ukukhanya nobumnyama. UNkulu…
Ake sifunde isiqephu sesibili saseBhayibhelini: “Futhi uNkulunkulu wathi, Makube khona umkhathi phakathi kwamanzi, futhi awuhlukanise amanzi kwamanye amanzi. Futhi uNkulunkulu wabe esenza umkhathi, futhi wahlukanisa aman…
Okulandelayo masifunde umusho wokuqala kuGenesise 1:9-11: “Futhi uNkulunkulu wathi, Amanzi angaphansi kwezulu mawaqoqeke ndawonye, bese kubonakala umhlabathi owomileyo.” Iziphi izinguquko ezenzeka emuva kokuthi uNkulunku…
UMdali wasebenzisa amazwi Akhe ukufeza uhlelo Lwakhe, futhi ngale ndlela wedlulisa izinsuku ezintathu zohlelo Lwakhe. Kulezi zinsuku ezintathu, uNkulunkulu akazange abonakale ezikhandla, noma ezikhathaza; esikhundleni sa…
UmBhalo uthi, “Futhi uNkulunkulu wathi, Amanzi mawagcwale uswebezane lwezilwane eziphilayo, kanye nezinyoni ezizondiza phezu komhlaba emkhathini wezulu. UNkulunkulu wase edala imikhomo emikhulu, nazo zonke izilwane eziph…
Ngokungabonakali, umsebenzi woMdali wokwenza zonke izinto wawukade uqhubeka izinsuku eziyisihlanu, okwathi ngokushesha emuva kwazo, uMdali wemukela usuku lwesithupha lokudala zonke izinto. Lolu suku lwabe lungesinye isiq…
Zonke izinto ezidalwe nguNkulunkulu, kuhlanganiswe lezo ezazikwazi ukunyakaza nalezo ezazingakwazi ukunyakaza, njengezinyoni nezinhlanzi, njengemithi nezimbali, futhi kuhlanganiswe nemfuyo, izilokazana, kanye nezilwane z…